गोही रिसेप्सनिस्ट बनेपछी | Makalukhabar.com
मंसिर १० । अमेरिकी हास्यकलाकार क्रिस डेलियाले आफ्नो इन्स्टाग्राम अकाउन्टमा र्‍याम्बो नामक गोहीको तस्वीर अप्लोड गरेपछि त्यसको चर्चा चुलिएको छ। ‘वाउ, गोहीले तपाईंको जागिर खाइदिने नै भयो,’ डेलियाले क्याप्सन लेखे । शुक्रवार शेयर गरिएको तस्वीरले ६४ हजार लाइक पाइसकेको छ र यो अझै बढ्दैछ।
गोहीले पाइन्ट लगाएको छ कि छैन होला भन्ने अनुमान गरेर मानिसहरू चर्चा गरिरहेका छन्। यो पुरानो तस्वीर हो र यसलाई पहिले रेड्डिट र ट्विटरमा शेयर गरिएको थियो।
अमेरिकाको फ्लोरिडामा बस्ने मेरी थोर्न नामक महिलाले र्‍याम्बो पालेकी हुन् । सन् २०१६ मा उनले गोही राख्न पाउने गरी मुद्दा जितेकी थिइन् । मुद्दा चल्दै गर्दा उनले उक्त गोहीलाई मानिस जस्तै गरी हुर्काएको र उसले कसैलाई पनि नटोकेको एसोसिएटेड प्रेसलाई बताएकी थिइन्। एजेन्सी
अचम्मकाे सहर जहाँ नेपाली १७ रूपैयाँमै भाडामा पाइन्छ प्रेमिका
मंसिर २०, बेइजिङ । चीनको एक सहरमा एक्लोपन महसुस गर्दै आएका युवालाई ध्यानमा राखेर भाडामा प्रेमिकाको व्यवस्था गरिएको छ ।गुआङ्गडोङ्ग प्राप्तको ह्युआन सहरमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । ‘दि भिटालिटी सिटी सपिङ्ग कम्प्लेक्स’ मा भाडाका प्रेमिका बन्न तयार युवती लस्करै उभिएका हुन्छन् । पोडियममा उभिएका ती युवती... जारी राख्नुहोस...
यस कारण कुकुरले भित्ता र स्तम्भमा मात्र पिसाव गर्ने गर्छ
मंसिर १७ । आफ्नो स्थलिय अधिकार स्थापित गर्नका लागि कुकुर रुख, स्तम्भ, भित्ता आदिमा पिसाव फेर्ने गर्दछ । ऊ चाहन्छ उसको एरियामा अरु कुकुरहरु आधिपत्य जमाउन नआउन । त्यसैले कुकुरहरु एउटाको एरियामा अर्को प्रवेश गर्दैनन ।यदि प्रवेश गर्ने कोशिष गरेमा उनिहरुविच झगडा हुन्छ । कुकुरहरुको अर्को अनौठो स्वभाव पनि... जारी राख्नुहोस...
नाक, आँखा र टाउकोको भाग बिनाकाे बच्चा जन्मेपछी डाक्टर निलम्बित
मंसिर १२ । नाक, आँखा र टाउकोको भाग बिना नै एकजना बच्चा जन्मिएपछि प्रसुतीसम्बन्धी एकजना पोर्चुगलका डाक्टर निलम्बनमा परेका छन्। रोड्रिगो नामक शिशुका आमाबुवालाई यो महिनाको सुरुमा आफ्नो छोरा नजन्मिँदा सम्म उसमा थुप्रै शारीरिक दुर्बलता होला भन्ने थाहै थिएन।हेलचक्य्राइँको आरोप लागेपछि प्रसुतीसम्बन्धी डाक्... जारी राख्नुहोस...
नर्सले बनाएकाे एक टिकटक जसले उधुमनै मच्चायो
मंसिर ९ । सामाजिक सन्जाल मध्येको एक एप हो ‘टिकटक’ । यसका प्रयोगकर्ता विश्वभर नै छन् । टिकटक प्रयोग गर्नेहरुमा बच्चादेखि बुढा सबै सामेल छन् । जसमा बनाइने भिडियोले मनोरन्जन र कलाको प्रस्फुटन गर्छ भने अर्कोतिर आलोचना पनि उत्तिकै खेप्नुपर्ने हुन्छ ।कतिपय यस्ता मानिस छन् जसको टिकटक भिडियोले उनीहरुको जीवन... जारी राख्नुहोस...
अचम्म अब दिसापिसाबबाटै धनी कि गरीब थाहा हुने
मंसिर ८ । तपाईंको आर्थिक सामाजिक हैसियत कस्तो छ ? आफूलाई माथिल्लो हैसियतको देखाउने देखावटी प्रयत्न त गर्नुभएको छैन ? यदि त्यस्तो गर्ने प्रयत्न गर्दै हुनुहुन्छ भने छाड्नुहोस् । किनकी अब तपाइँको बाहिरी देखावटीले होइन दिसापिसाबबाटै तपाईंको आर्थिक सामाजिक स्तर पत्ता लगाउन सकिनेछ ।सुन्दैमा अनौठो लाग्न सक... जारी राख्नुहोस...